Xabadka Sawir-Qaadeyaashu Black Labyrinth waxaa qoray Eckhard Beger for ArteNemus waa laambad toosan oo qolka sawirka leh oo leh 15 sawir qaadayaal oo sawiradooda dhiirrigelinaya kana soo baxay kabaha caafimaadka ee Aasiya iyo qaabka Bauhaus. Qaab dhismeedkeeda madoow ee qaab dhismeedka ayaa lagu soo nooleeyaa iyada oo loo marayo iftiin marmar ah oo dhalaalaya oo leh saddex qaybood oo focal ah oo lagu sawiray qaab dhismeedka. Fikradda iyo habka mashiinka toosan ee qolka wareega wareegaya waxay soo gaarsiinayaan qeybta muuqaalkeeda xiisaha leh. Qaab dhismeedka alwaaxka waxaa lagu daboolay qaab madow oo midabeysan halka marmarry ka lagu sameeyay maple flaw. Vneer-ka waxaa lagu duugay si loo gaaro dhammaystirta satin.
Axad 2 Bisha Shanaad 2021
Jimco 30 Bisha Afraad 2021
Buugga Macluumaadka Hal shay oo ku saabsan Hari Raya - waa in heesaha aan dhamaadka lahayn ee Raya ee taariikhdihi hore ay weli ku sii dhow yihiin qalbiyada dadka ilaa maanta. Sidee kafiican oo tan waxkabaran oo loo samayn karaa ookastoo leh mowduuca 'Classical Raya'? Si loo soo saaro nuxurka mawduuca, buugga hamper hamper waxaa loogu talagalay inuu u ekaado duubitaankii hore ee vinyl. Hadafkayagu wuxuu ahaa: 1. Abuurista naqshad gaar ah oo naqshadeyn ah, halkii laga heli lahaa bogag ka kooban aragtida badeecada iyo qiimahooda. 2. Abuur heer heersare ah oo loogu talagalay muusikada qadiimiga ah iyo fanka dhaqanka. 3. Soo qaado ruuxa Hari Raya.
good morning original calendar 2012 “Farm” Kalandarka Talaado 22 Bisha Lixaad
inci Ceramik Isniin 21 Bisha Lixaad
Prisma Qalabka Curyaameysan Ee La Qaadi Karo Ee Ultrasonic Axad 20 Bisha Lixaad
Sumadda Sumadda Xabadka Sawir-Qaadeyaashu Farshaxannada Magaalooyinka Dhejis Buugga Macluumaadka